मनाेरन्जन Archives - Page 83 of 100 - Purbeli News
एजेन्सी। बलिउडका व्याचलर हिरो रणविर सिंहको विवाहको हल्ला यतिखेर व्यापक चलेको छ । माता पिताले बुहारी खोजिरहेको हल्ला बाहिर चलेपछि उनले मिडियामा एक बयान दिएका छन् । उनले भनेका छन्,‘म आफैले रोजेकी युवतीसँग विवाह गर्नेछु ।’ पछिल्लो पटक बाबा आमाले खोजेको केटीसँग विवाह गर्ने हल्ला चलेपछि उनी बोल्न बाध्य भएका हुन् । अभिनेत्री कटरिना ब्रेकअप भएपछि उनको विभ...
असार २२, ईटहरी / नेपालि लोक गीतको क्षेत्रमा एउटा राम्रो चर्चा कमाउन सफल म्युजिक कम्पनि हो प्रियशी म्युजिक प्रालि । बिगतमा निकै चर्चित गीत तथा भिडियोहरु बजारमा ल्याईसकेको यस कम्पनीले फेरी पनि एक अर्को म्युजिक भिडियो सार्बजनिक गरेको छ । चर्चित लोक गायिका पूर्णकला बिशी र कमल साइलोको आवाज रहेको "रोप छुरा" बोलको गीत सार्बजनिक भएको हो । दर्पण यात्री ला...
नायिका निशा अधिकारीको आक्रोश,एकतर्फी समाचार छाप्नु कहाँसम्मको न्याय हो ?’
काठमाडौँ । हरेका बुधबार प्रकाशित हुने जनआस्था साप्ताहिक पत्रिकाप्रति नवविवाहित नायिका निशा अधिकारी आक्रोशित बनेकी छिन् । व्यक्तिगत जीवनलाई खलल पुर्याउने प्रकृतिको समाचार छापिएको भन्दै अधिकारी जनआस्थाप्रति रुष्ट बनेकी हुन् ।नेपालआजसँग कुराकानीका क्रममा नायिका अधिकारीले यस्ता समाचारले आफ्नो बस्दै गरेको घर बिग्रन सक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘भर्खरै वि...
यति हुन्छ बलिउड स्टारको एउटा चलचित्र खेलेको पारिश्रमिक !
सबैको कौतुहल्ताको विषय हो एउटा चलचित्रमा काम गरेवापत् बलिउड स्टारले कति पैसा लिन्छन् ? भारतीय संचारमाध्यमहरुका रिपोर्टको आधारमा हामीले त्यो कौतुहल्तालाई हल गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । यस्तो छ बलिउड स्टारहरुको पारिश्रमिकः १. सलमान खान सलमान खान चलचित्रको कमाइमा हिस्सा लिने स्टार हुन् । उनको चलचित्रको कमाइमा ७० देखि ८५ प्रतिशतसम्म हिस्सा लिने छन् । ‘...
असार १७, ईटहरी / यतिखेर देशमा चुनावी माहौल तातिरहेको छ भने फिल्मी दुनियामा "सायद-२" को चर्चाले निकै ब्यापकता पाएको छ । सामाजिक संजालमा भाईरल बनेको सायद २ को प्रोफाईल फोटोको चर्चा अहिले विभिन्न किसिमले चलिरहेको छ । यसैक्रममा एक युवतीले हामिलाई मोबाईल स्कृन्सट पठाउदै "सायद २" ले गर्दा आफ्नो पनि फ्यान बनेको जानकारी गराएकी छिन । धरान निवासी सुस्मिता...
यसकारण टुटेको थियो अभिषेक र करिश्माको ‘इङ्गेजमेन्ट’
मुम्बई। एक दशक अघिकी चर्चित हिरोइन करिश्मा कपूर अहिले ४३ औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । उनी अहिले पनि बलिउडमा सिल्भर स्क्रीनमा छाइरहेकी छन् । कपूर खानदानबाट बाहिरिएपछि उनलाई बलिउडमा स्थान बनाउन धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्यो । करिश्माको विहे अघिको अन्तिम फिल्म ‘बाज : अ बर्ड इन डेन्जर’ हो । जुन फिल्म सन २००३ मा रिलिज भएको थियो । सन २०१३ मा सञ्जसंग सम्बन्ध विच्छे...
आज कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको जन्मदिन ! धुर्मुसले भावुक हुदै लेखे यस्तो
काठमाडौं । कलाकार कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीको आज जन्मदिन । कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसले बुधबार राति नै श्रीमती घिमिरेलाई भावुक हुँदै शुभकामना दिएका छन् ।‘म खहरे थिँए । उनी शान्त, विशाल अनि कञ्चन समुद्र जस्तै थिइन् । म हर कुरामा हतारिन्थे । उनी हमेसा सकारात्मक सल्लाह र सुझाव दिन्थिन् । हरेक योजना र सोचहरूलाई सही दिशातर्फ लगेर सफल बनाउन आँट र साहस दि...
निसाको हातमा लाग्यो मेहन्दी , अाज बैवाहिक जीवनमा बाँधिदै (तस्बिर सहित )
नायिका निसा अधिकारी र क्रिकेटर शरद भेषवाकरबीच अाज असार १६ गतेबिवाह हुँदैछ । बिवाहको सम्पुर्ण तयारी भईरहदा हालै निसा घरमा भएको मेहन्दी कार्यक्रममा फेसबुकमा सार्वजनिक भएका छन् ।उक्त तस्बिरहरु नायिका बेनिसा हमालको फेसबुकबाट लिईएको हो । मेहन्दीको कार्यक्रममा निसाको नजिकका मित्रहरु माल्भिका सुब्बा, नायिका बेनिसा हमाल ,रिमा विश्वकर्मा, निलु डोल्पा लगायतक...
काठमाडौँ। निर्माता तथा कलाकार दीपक राज गिरीले अबका दिनमा सिनेमा सम्बन्धि हुने कुनैपनि अवार्ड कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेका छन् । पछिल्लो समय आफू अवार्ड कार्यक्रममा जानु र कार्यक्रमलाई बीचमै छाड्नुलाई धेरैले अवार्डको लोभि भएको र आफूले नै अवार्ड पाउनु पर्ने मान्यता भएको व्यक्तिको रुपमा व्याख्या गरेको भन्दै उनले यस्तो निर्णय लिएको उल्लेख ग...